China n'èzí All Aluminom Ogige Bistro set factory na suppliers | Sun Master
Nọmba nlereanya: WA-1072
Ibu ibu: 350pcs/40′HQ
Agba: Ọchịchịrị Grey/ dị ka katalọgụ dị ka arịrịọ onye zụrụ ya si
Ụdị No. WA-1072
Ụdị ANYANWU NKE Ibu ibu 350pcs / 40'HQ
1.Full aluminom oche oche, ihe ochie na-emecha na mkpuchi ntụ ntụ n'èzí. Ihe eji eme vintage a na-eme n'aka na-enye ụdị dị iche iche maka ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, cyber cafe, patio na ebe obibi.
Ịgbado ọkụ zuru oke na nchacha na-eme ka ọ maa mma na anwụ. Tebụl aluminom dị n'èzí dị ọkụ na nke siri ike. Dị ka anyị si mara, ígwè nwere ike ịta nchara ma ọ bụrụ na ekpughere ya na gburugburu mmiri. Ihe mkpuchi ntụ ntụ bụ ụzọ kachasị mma iji dịrị ogologo oge maka elu, a pụkwara iji ya mee ihe ruo afọ 15 n'enweghị nsogbu.
Anti-oxidation, na-eji ihe dị arọ na nchekwa gburugburu ebe obibi. ndụ ọrụ na-adịgide adịgide.
2.Green ngwaahịa: adịghị egbu egbu, na-adịgide adịgide na nhazi dị mfe, agba agba, ịsacha, ịdị arọ dị arọ ma dị mfe maka ịkwaga.
3.nwere ike iji n'ime ụlọ na n'èzí.
Ubi, Patio, Omume, Wedding, mgbazinye, Party, Pub, Bistro, Ụlọ oriri na ọṅụṅụ,
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ , Ụlọ oriri na ọṅụṅụ , Hotel ,Club , mmanya , Nkwekọrịta , Ọha , Kọfị , Commercial ,
oriri, ụlọ ọbịa, kichin, square, gburugburu, nri nri, ụlọ nri, oche, nri ngwa ngwa,
Ngwongwo ụlọ akwụkwọ wdg.
4.Size na agba nwere ike ịhazi ya, Nhazi Na-adọrọ adọrọ, Ahịa asọmpi, Nkasi Obi, mara mma na Ịdịgide.Ụlọ ọrụ ahụ na-enye ngwaahịa ahaziri iche na ọrụ OEM. Nchịkọta ọhụrụ dị iche iche na imewe na-apụta kwa ọnwa na ụdị na akwa dị ugbu a. Ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwere nkà nwere nkà na igwe emelitere.
Nke gara aga: N'èzí gburugburu Ogige iri nri Aluminium Bar Tebụl
Osote: Ngwa ihe eji eri nri aluminom
Aluminom n'èzí Patio oche
Oche ụlọ iri nri
Oche erimeri nke oge a
Oche ndị dị n'èzí nke oge a
Oche ụlọ oriri na ọṅụṅụ Aluminom n'èzí
Oche ụlọ oriri na ọṅụṅụ n'èzí
Oche n'èzí Aluminom Stackable
2021 Foshan wedara Patio Furniture nri ime ụlọ…
Ngwongwo Patio dị n'èzí 2021 ahaziri nke oge a ...
Onye nrụpụta ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ Stackable Ra...